“Gacanta uu Cirro ii taagay waxay ahayd mid munaafaqnimo ah, waayo? in uu gacanta ii taago”….. | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Wasiirka Arimaha Gudaha oo dadka uga digay duufaano Somaliland ku soo fool leh
“Gacanta uu Cirro ii taagay waxay ahayd mid munaafaqnimo ah, waayo? in uu gacanta ii taago”…..
Published on October 31, 2016 by sdwo · No Comments
Berbera (SDWO.com): Guddoomiye ku xigeenka xisbiga mucaaridka ah ee WADDANI Axmed Muumin Seed, oo shirweynihii xisbigaasi doorashadii musharaxanimadda madaxweyne ku xigeenka lagaga adkaaday ayaa munaafadnimo ku tilmaamay guddoomiye Cirro oo isaga gacanata u taagay ama u codeeyay.
Waxaanu sheegay in gacanta uu C/raxmaan Cirro u taagay isaga in ay uga fiicnayd in uu cadaalad sameeyo, isagoo xusay in aanu isagu joogin-ba madashadii shirku ka socday markii uu guddoomiyaha WADDANI gacanta u taagay, isla markaana uu ku baxay shirka.
Axmed Muumin Seed, oo isagoo jooga magaaladda Berbera, ay maanta warbaahinta wax ka waydiisay cabashadda mudooyinka danbe ka soo yeedhaysay iyo waxa ay tahay cadaalad daradda uu tirsanayo.
Waxa uu ku dooday in siyaabo badan darteed uu isagu uga xaq lahaa Ambassador Maxamed Aw Cabdi musharaxnimadda madaxweyne ku xigeenka xisbiga WADDANI, isla markaana uu muddo dheer soo ahaa ninka keliya ee ka turjuma af-kaarta mucaaridnimo ee xisbiga.
Isagoo ka jawaabayay su’aal ahayd sababta uu cadaalad daradda u tabanayo, maadaama oo uu C/raxmaan Cirro isaga u codeeyay, waxa uu ku jawaabay “Gacan-taagii Cirro, waxay ahayd mid munaafaqnimo ah, sida aan aaminsanahay.
waayo? In uu aniga gacanta ii taago waxaa ka fiicnayd in uu cadaalad sameeyo. Laakiin anigu markii uu gacanta ii taagay maan joogin, saxaafadda ayuunbaan ku arkay, waan baxay anigu markaa.
Sababta aan u baxay-na waxaanan filayay in marka guddoomiyaha loo codeeyo, nidaam ahaan in aan anigu ku xigo.
Xagga xuruufta (Alphabet) hadii la eegana, aniga iyo ninkan saaxiibkay ah, Axmed iyo Maxamed ayaanu kala nahay oo aniga ayaa ka horayn lahaa, hadana waxaa la leeyahay sidii bixinta lacagta musharaxnimadda loo kala horeeyay, taana aniga ayuunbaa yeelan lahaa.
Waxaas oo dhan inta laga tegay ayaa la galay qof jeclaysi”.
Dhinaca kale Axmed Muumin Seed, ayaa ku dhaliilay musharaxa madaxweyne-nimo ee xisbiga WADDANI ahna guddoomiyaha golaha Wakiiladda C/raxmaan Cirro, in uu doonayo in isagoon wax tacab iyo hawl ah midnaba ka gelin kursiga madaxweyne-nimo ee dalka in uu qorshaystay inta uu si fudud ku gaadho.
Hase yeeshee, waxa uu tilmaamay Seed, in uu C/raxmaan Cirro kula talinayo in aanu sida fudud ee uu qorshaystay ku gaadhi Karin kursiga ugu sareeya dalka, isla markaana looga baahan yahay in uu fadhiga ka kaco, oo uu bulshadda soo dhex maro.
“Saaxiibkay (Cirro) waa guddoomiyaha golaha Wakiiladda, hadhka ayaanu iska fadhiyaa, waxaana filayaa in uu rabo in isagoo hadhka iska fadhiya in uu doonayo inta uu Laamiga ka talaabo, in uu madaxtooyadda gallo, laakiin saaxiibkay waxaan u sheegayaa taasi in aanay suurto-gelyanin.
Balse kursiga madaxweyne-nimo waxay u baahan tahay in cadeedda loo soo baxo, in tacab badan loo gallo, in dadka la dhex marro, laakiin ta uu isagu rabo in aanay Somaliland ka soconaynin ayaan filayaa” ayuu yidhi Axmed Muumin Seed.
Khadar Cabdi Muuse